Waa siddee xaaladda xiddigaha ka dhaawacan Kooxda Real Madrid, ka hor 12 maalmood kulanka adag ee El Clásico? – Gool FM
(Madrid) 14 Okt 2019. Kooxda reer Spain ee Real Madrid ayaa waxay ku nooshahay xaalad dhaawacyo ee aad u adag tan iyo bilawga xilli ciyaareedkan, iyadoo ay xaalada ku sii xumaatay Los Blancos inta lagu gudajiray usbuuca FIFA, waxaana markale dhaawacyo kala duwan ay ka soo gaareen xiddigaha Luka Modric iyo Gareth Bale, inta ay ku gudi jireen waajibaadka xulalkooda.
Marka laga soo tago dhaawacyada ay la kulmeen xiddigaha Luka Modric iyo Gareth Bale, waxaa sidoo kale dhaawacyo kala duwan ka qaba kooxda Real Madrid dhamaan xiddigaha kala ah Marco Asensio, Ferland Mendy, Nacho, Thibaut Courtois, Marcelo Toni Kroos iyo James Rodriguez.
Dhaawacyadan ay qabaan dhamaan xiddigahan ka tirsan kooxda Real Madrid ay waxay imaanayaan xilli uu ka harsan yahay 12 maalmood oo kaliya, kulanka xiisaha badan la wada sugayo El Clásico ee horyaalka La Liga lugtiisa hore, kaasoo ku dhex mari doono kooxaxa Barcelona iyo Real Madrid garoonka Camp Nou.
Wargeyska “AS” ee dalka Sain ayaa daabacay warbixin ku saabsan xaalada xiddigaha ka dhaawacan kooxda Real Madid, kahor kulan la wada sugayo ee El Clásico, iyadoo ay jiraan xiddigo qaar ee la shaki galinayo ka qeyb galkooda ciyaartan adag ee ka dhici doonta garoonka Camp Nou, waxaana ugu horeeya laacibka reer Germany ee Toni Kroos.
Wuxuu ka baxay garoonka isagoo garbaha laga hayo kulankii ay xalay ku wada ciyaareen xulalka Weles iyo Croatia isreebreebka koobka Euro 2020, laakiin sida ay u badan tahay waxaa la shaki galinayaa inuu ciyaari karo kulamada Mallorca iyo Galatasaray, iyo sidoo kale ciyaarta la wada sugayo ee El Clásico.
Gareth Bale ma uusan qabin dhaawac qaas ah sababtoo ah wuxuu dhammeystiray ciyaarta, laakiin wuxuu walwal abuuray daqiiqadihii ugu dambeeyay, waxayna u muuqataa inuu qabo dhaawac dhank muruqa ah, rajooyinka laga qabi karo ayaa waxay tilmaamayaan inuu ku seegi karo kulanka Mallorca si taxadir leh, ama inuu keydka fariisto.
Zinedine Zidane ayaa waxaa lagu qasbay inuu nasiyo Toni Kroos ciyaartii ugu dambeysay ee Granada ay la ciyaareen, sababo la xiriira dhaawac lugta ah uu qabay, waxaana jira suurtogalnimo sare ee ah inuusan awoodi karin ka qeyb galka ciyaarta Barcelona.
Xiddiga reer Colombia ee James Rodriguez ayaa todobaadkii hore tababar ku qaatay isaga kaligiis qolka jimicsiga, sababa la xiriira dhaawac dhanka muruqa ah ee soo gaaray, laakiin dhib la’aan wuxuu diyaar u noqon doonaa kulamada soo socda ay ciyaari doonto kooxda Real Madrid.
Si la mid ah xaalada James Rodriguez, ciyaaryahanka reer Brazil ee Marcelo ayaa ka tagay tababarka kooxda sababa la xiriira dhaawac yar ee soo gaaray isbuucii hore, laakiin wuxuu ku soo laabtay si uu uga qeyb qaato tababarka guud ee kooxda sida caadiga ah isbuucaan.
Mendy ayaa dhaawacii labaad soo gaaray xilli ciyaareedkan bishii lasoo dhaafay 24-keeda, maqnaanshihiisa waxaa lagu qiyaasay 3 ilaa iyo 4 usbuuc, sidaas darteed sida ay u badan tahay tababare Zinedine Zidane ayaan u adeegsan doonin kulanka El Clasico-da ee soo aadan.
Goolhayaha reer Belguim ayaa la dhibtoonayay xanuun dhanka caloosha ah toddobaadkii hore, laakiin waxaa lasiiyay daawooyin munaasib ku ah ee ku filan, wuxuuna ka bogsaday gabi ahaanba cudurkii uu qabay, isaga oo diyaar u noqon doono inuu ciyaaro kulanka soo socota.
Nacho ayaa ka maqnaan doona Real Madrid dhowr toddobaadyo kale kaddib markii uu dhaawac jilibka ah ka soo gaaray laba toddobaad ka hor, dabcanna isagu ma ciyaari doono saddexda kulan ee soo aadan.
Xiddiga da’ada yar ee reer Spain ayaa ka maqnaan doona Real Madrid ilaa iyo bisha Febraayo, kaddib dhaawac soo gaaray, waxaana maqnaanshihiisa uu sii socon karaa ilaa iyo bisha Maarso.